USolwazi Glen Snedden oze kosebenza eMkhakheni wobuNjiniyela bokuKhanda.
Ungoti WoMhlaba Wezinjini Zamabhanoyi Uqale E-UKZN
UMkhakha wezobuNjiniyela bokuKhanda usimeme ngokufika kowayengumfundi waseNyuvesi nowayengumholi womcwaningo e-Council for Scientific and Industrial Research (e-CSIR) uSolwazi Glen Snedden.
U-Snedden, ongungoti kuma-gas turbine uhlonishwa izwe lonke nomhlaba ngekhono kanti akezile emKhakheni wezobuNjiniyela bokuKhanda kuphela kepha futhi usethimbeni eliphethe i-Aerospace Systems Research Group (i-ASReG).
Ukuchazwa wubunjiniyela bezindizamshini nobunjiniyela bezinto ezindizayo kusukela esewumfana nezindaba ezazixoxwa ngeMpi yesiBili yomHlaba kwenza ukuthi u-Snedden acwaninge umsebenzi womenzi we-Spitfire umakhi wenjini ye-gas turbine u-Frank Whittle no-Barnes Wallis, umsunguli webhomu egxumagxumayo nezinye izinto.
Ngemva kokuqeda umatikuletsheni eWestville Boys’ High School eThekwini, u-Snedden waya kofunda e-University of Natal eyofundela ubuNjiniyela bokuKhanda, wenza zonke izifundo ezazizomholela emabhanoyini nakuba ikusasa lalibukeka lingekho ebunjiniyeleni bezamabhanoyi eNingizimu Afrika. Wagcina eqede iziqu zeMasitazi eNyuvesi ngaphansi kweso likaSolwazi u-Jeff Bindon noSolwazi Graham Smith.
U-Snedden wasebenza e-CSIR iminyaka ecela kwengama-25 esebenza ezinhlotsheni ezehlukene zezinjini zamabhanoyi e-South African Air Force ngaphambi kokuphatha amaqoqo akhe ocwaningo. Wenza iziqu zobudokotela e-Durham University eNgilandi esasebenza.
E-CSIR, u-Snedden wayegxile emisebenzini yamabhanoyi, wasebenza ezinhlelweni ezinkulu nezinkampani ezinjenge-Société Nationale d'études et de Construction de Moteurs d'Aviation (SNECMA), i-Klimov ne-Rolls Royce Royal Aeronautical Society (iRAS) ne-International Society of Air Breathing Engines (i-ISABE). Wasebenza nasezinhlelweni ezinkulu ezixhaswe yi-European Union ngobuchwepheshe bama-gas turbine, wabamba iqhaza ekuthuthukiseni izinjini zamabhanoyi zesimanje.
U-Snedden wayengumengameli kanti manje uyilungu le-Council of the Aeronautical Society of South Africa, usekomitini le-International Society of Air Breathing Engines (i-ISABE), noncwaningi we-RAS kanti usanda kuqokelwa esiGungwini sabaHleli be-Aeronautical Journal ye-RAS, eyibhuku locwaningo elidala kwezezindizamshini elisekhona namanje .
Umsebenzi wakhe e-CSIR wawugxile ekusunguleni izinhlelo zocwaningo namanyuvesi amaningi ngama-gas turbine, ama-turbo pump, ukwakha ama-compressor, ukudlulisa ukushisa nemishini yama-turbo nezinye izinto ezinjalo. U-Snedden useke wafundisa, waphinde wasiza izitshudeni ezenza ucwaningo e-University of Johannesburg, e-University of Pretoria naseTshwane University of Technology
Ngenkathi kuncipha ukuxhasa ngemali e-CSIR, u-Snedden ubone ubumqoka bomsebenzi wakhe namanyuvesi wase enquma ukuza e-UKZN.
Ebonga amandla alo mkhakha nethimba labacwaningi alifice e-UKZN, u-Snedden uhlose ukubambisana nozakwabo ekwenzeni isiphuphutheki sokuqala eNingizimu Afrika esisebenzisa uketshezi kanti ulwazi lwakhe lwemishini yama-turbo uluqondise kuma-turbo pumb. Usebenza nezinkampani zalapha ezweni ukwenza ama-fan asezimayini.
U-Snedden ubheka amathuba okusebenzisa ama-gas turbine anothando lwabo, njengasemasosheni, ezimweni eziphuthumayo nasekungcebelekeni. Uthi imisebenzi esebenzisa ama-gas turbine amancane alungele ukuqeqesha izitshudeni ukuthi zibambe iqhaza ekusunguleni izinto ezintsha ezinkampani ezinkulu emhlabeni.
‘Imboni yezindizamshini ibonakele iyimboni esimeme edlulise ubuchwepheshe kweminye imikhakha kanti nakuba i-COVID-19 iyihlehlisele emuva kodwa le mboni iyasimama, iholwa yi-Space X. Yisifiso sami ukuthi i-UKZN nethimba lase-AsREG bagqamise iNingizimu Afrika kulezi zindawo,’ kwengeza yena.
I-Society of SA Geographers Yemukele Izifundiswa Ezimbili Zase-UKZN
Isitshudeni Esinama-65 Sikhiphe Inoni!
Imisebenzi Yomdanso Idlalwe Okokuqala Kwingosi Yezokuxhumana Ngobuchwepheshe